ကွန်မြူနစ်တွေကို ဘာ့ကြောင့် . . . ~ လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်
ကွန်မြူနစ်တွေကို ဘာ့ကြောင့် . . .
Friday, October 09, 2009 0000 1 comment
ကွန်မြူနစ်တွေကို ဘာ့ကြောင့် ထုတ်ပစ်ရသလဲ
ကွန်မြူနစ်ပါတီသည် (ဖဆပလ) အမျိုးသားညီညွတ်ရေး တပ်ပေါင်းစုကြီးတွင် ပါဝင်သော ပါတီတခုသာလျှင် ဖြစ် သည်။ (ဖဆပလ) အဖွဲ့ကြီး၏ ၀ါဒနှင့် လုပ်ငန်းစဉ် အတိုင်း လိုက်နာ၍ ပါတီလုပ်ငန်းများ ချမှတ်လုပ်ကိုင်ရန်သည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ တာဝန်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကွန်မြူနစ် ပါတီသည် (ဖဆပလ) အမျိုးသား တပ်ဦးတွင် ပါဝင်သော် လည်း (ဖဆပလ) ၏ ၀ါဒနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို စည်းကမ်းမဲ့စွာ ပုတ်ခတ်တိုက်ခိုက်လာသည်။ အယူအဆကွဲပြား လျှင် အဖွဲ့ချုပ်အတွင်း၌ ကျေညက်သည်အထိ ဆွေးနွေးနိုင်ခွင့် ရှိပါလျက်နှင့် အဖွဲ့တွင်းတွင်မဆွေးနွေး၊ အပြင်မှနေ၍ ပါတီပိုင် သတင်းစာဂျာနယ်တို့မှ ပုတ်ခတ်ဝေဖန်လာသည် ကွန်မြူနစ် ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်သည့်(ဖဆပလ) ဗဟိုကော်မတီက တညီတညွတ်တည်း ချမှတ်ထားသော လုပ်ငန်းစဉ်များကို ချိုးဖောက်လေ့ရှိသည်။ အကြိမ်ကြိမ်ဆွေးနွေးသတိပေးသော်လည်း ကွန်မြူနစ်ပါတီသည် မ ပြုပြင်ခဲ့ချေ။ ထို့ကြောင့် နောက်ဆုံးတွင် ကွန်မြူနစ်ပါတီအား ၁၉၆၄ ခု၊ အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် (ဖဆ ပလ အမျိုးသားတပ်ဦး) မှ ထုတ်ပယ်ပစ်လိုက်ကြရလေသည်။ အောက်ပါ မိန့်ခွန်းမှာ ကွန်မြူနစ်ပါတီအား (ဖဆပ လ အဖွဲ့ချုပ်) မှ အဘယ့်ကြောင့် ထုတ်ပစ်ရကြောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြထားသော မိန့်ခွန်းဖြစ်သည်။ ဤမိန့်ခွန်း ကို ၁၉၆၄ ခု၊ အောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ရွှေတိဂုံအနောက်မုခ်၌ ပြောကြားရာ လူထုတသိန်းကျော် တက်ရောက် နားထောင်ခဲ့သည်။
ယင်းမိန့်ခွန်းကို ၁၉၆၄ ခု၊ အောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်နေ့၊ ည ၇ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် အသံလွှင့်ရုံမှ “ ကွန်မြူနစ်တွေ ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ထပ်မံအသံလွှင့်ခဲ့သေးသည်။ ယနေ့အစည်းအဝေးကတော့ အများသိတဲ့ အတိုင်းဘဲ။ ဖ၊ဆ၊ပ၊လ က ကွန်မြူနစ်တွေကို ဘာပြုလို့ ထုတ်ပစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြာင်း ရှင်းပြဖို့ပါဘဲ။ ဒီအကြာင်းတွေပြောရမယ်ဆိုရင် အများကြီးဘဲ။ ကျုပ်လဲစီကာစဉ်ကာ ပြောဖို့အချိန်မရဘူး။ ခင်ဗျားတို့လဲ နေပူမှာ သိပ်ကြာကြာနေနိုင်မှာ မဟုတ် ဘူး။ နောက်ကြောင်းတွေကိုလဲဘဲ ပြန်ပြောသင့်သလောက်ပြောရမယ်။
ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ အဖွဲ့ချုပ်ဟာ အားလုံးသိကြပြီးဖြစ်ကြမှာဘဲ။ ဂျပန်ခေတ်ထဲမှာ တိတ်တိတ်ပုန်းပေါ်လာတယ်။ ဒီအဖွဲ့ ချုပ်ကြီးရဲ့ဝါဒလုပ်ငန်းစဉ် အရပ်ရပ်ကို ကျွန်တော်ဘဲ စတင်စီမံပြီး ကျွန်တော်နဲ့တပ်မတော်ရဲ့ ကောင်းမှုကြောင့် ဂျ ပန်တွေ ပြန်ချဖို့ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းဟာ အဲဒီကျမှဘဲ ကျကျနနဖြစ်လာတော့တယ်။
အစတုန်းကဆိုယင် ကွန်မြူနစ်တွေဆိုတာလဲ မပြောပလောက်ပါဘူး။ အလုပ်လဲဘဲ တကယ်မရှိပါဘူး။ ပြီးတော့ သူတို့ဝါဒကလဲ “အင်္ဂလိပ်လာယင် လက်နက်ချလိုက်” ဆိုတဲ့ဝါဒလောက်ဘဲရှိတယ်။ အဲတာနဲ့ကျုပ်တို့နဲ့ တွဲမိမှ ဒီ လိုမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဂျပန်ကို တော်လှန်ဖို့ အပြင်းအထန်စီစဉ်ရမယ်။ ဗမာလူထုတွေ ဖွဲ့စည်းနိုင်သလောက်ဖွဲ့စည်းပြီး လက်နက်ရနိုင်သလောက် လက်နက်စွဲကိုင်ခိုင်းပြီး လုပ်ထားမှ ဂျပန်ကိုချပြီးတဲ့နောက် လွတ်လပ်ရေးအင်အားစု ဖြစ်လာနိုင်မယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ယင် ပခုံးပြောင်းတဲ့အလုပ်လောက်သာ ဖြစ်မယ်လို့ကျုပ်တို့ပြောခဲ့တယ်။
အဲဒီတော့မှ သူတို့လုပ်ငန်းစဉ် နဲနဲမှန်လာတယ်။ ဒါတောင် တကယ့် တကယ် လုပ်ကြတမ်းဆိုတဲ့ ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်နဲ့ မလုပ်ရဲ၊ မကိုင်ရဲဖြစ်ပြီး လက်နက်နဲ့ထကြွပုန်ကန်ဖို့ အပြင်းအထန်စီစဉ်ရမယ်လို့ ကျုပ်ပြောတာကို သခင်သန်း ထွန်းနဲ့ကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင်အချို့ က ဒီလိုလုပ်လို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ။ အနုပဋိလောမ၀ါဒနဲ့ မကိုက်ဘူး လို့ပြောကြ သေးတယ်။ အဲတာနဲ့ ကျုပ်တို့လုပ်ကြတော့မှ ကျုပ်တို့ရဲ့လူအား၊ ငွေအား၊ လက်နက်အား၊ ဥာဏ်အားတွေနဲ့ ဂျပန် ချမဲ့ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ တွင်ကျယ်လာတယ်။
ဒီလိုဖြစ်လာတယ်ဆိုယင်ဘဲ နားတောင်းရောင်ကြောင့် ပါးပြောင်ဆိုတာလို ကွန်မြူနစ်တွေလဲ တက်လာကြတာ ဘဲ။ ကျွန်တော်တို့ကလဲ ကွန်မြူနစ်ဝါဒကို မပစ်ပယ်တော့ သူတို့ဒီလိုတက်လာတာကိုလဲ ဘာမှမနာလိုမရှိပါဘူး။ သူတို့ချည်း ဟိုဟာဒီဟာတွေ လုပ်သလို အသားယူသွားတာကိုလဲ မချေပပါဘူး။ သူတို့ညစ်တာတွေ၊ ခြေထိုးတာ တွေ၊ ကလိန်ကျတာတွေကို အများကြီးမကျေနပ်ပေမဲ့ အချင်းချင်းသာ အတွင်းရေးလောက်ဘဲ ပြောကြတယ်။ အပြင်ကိုမထုတ်ပါဘူး။ သူတို့ကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး၊ ပေးထားတဲ့ကတိတွေ ဖျက်၊ အတူတူဆုံးဖြတ်တော့တမျိုး၊ လုပ်တော့တမျိုး၊ ဒါတွင်မကဘူး၊ မဟာမိတ်တွေဆီကို လူလွှတ်ဖို့ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ မဟာမိတ်တွေဆီက ရတဲ့လက်နက် နဲ့ ရွှေငွေအကူအညီဘဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ချည်းကျိတ်လုပ်ကြတယ်၊ အဲတာတွင် မပြီးသေးဘဲနဲ့ ကျွန်တော်တို့ကိုဘဲ မျက်ကန်းမျိုးချစ်တွေ၊ သွေဖီရေးသမားတွေ၊ ဖက်ဆစ်သမားတွေ အစရှိသဖြင့် တိုးတိုးတမျိုးမျိုး၊ ကျယ်ကျယ်တ မျိုး ကျုပ်တို့ကွယ်ရာမှာ ဆဲသေးတယ်။
အထူးသဖြင့် အင်္ဂလိပ် စစ်တပ်တွေ ပြန်ဝင်လာတဲ့အခါ ဆိုရှယ်လစ်တွေက လက်နက်စုတယ်။ တပ်မတော်ကဘာ တွေ လုပ်နေတယ်။ အင်္ဂလိပ်ကို ပြန်ချဖို့လုပ်နေတယ်လို့ စာရေးပေးလိုပေး၊ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပင်းလိုပင်းလုပ်ကြ တယ်။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ဗမာ့တပ်မတော် ဆိုလို့ရှိယင် ဖျက်ဖို့တိုက်တွန်းကြတယ်။ ကျုပ်ဆီမှာ သခင်စိုးက ရေးပြီး သခင်သန်းထွန်းလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ စာတစောင်တောင် ရှိသေးတယ်။ အဲတာတွေလဲ ကျုပ်တို့အင်မ တန် သည်းခံရတယ်။ သူတို့အလိုလိုက်ပြီးလက်နက်ချရမယ်ဆိုလို့ လက်နက်တွေချခဲ့ရတယ်။ ကျုပ်တို့ ကန္ဒီသွား တုန်းကဆိုယင် ကိုသိန်းဖေက တပ်မတော်ကိစ္စနှင့် ပက်သက်ပြီး ခင်ဗျားတို့လက်နက်အားကိုးမလုပ်စေချင်ဘူး။ အေးအေးချမ်းချမ်း ပြုပြင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ဖို့လိုတယ်။ လွတ်လပ်ရေးကို အေးချမ်း သာယာစွာဘဲ အရယူဖို့ ပြောသေးတယ်။ အဲဒီလိုသူတို့က ဗမာတိုင်းပြည်ကို သစ္စာဖောက်ခဲ့တဲ့ အင်္ဂလိပ်ရဲ့အလို တော်ရိလမ်းတွေကို လိုက်ခဲ့လို့ ခုအထိ ကျုပ်တို့လိုက်ပြီး ဗမာပြည်နိုင်ငံရေးကို ဆည်နေရတုန်းဘဲ။ အင်္ဂလိပ်တွေ ၀င်လာစက ကျုပ်သာလက်နက်ကိုင်ပြီး သူပုန်ထချင်ယင် မခက်ခဲပါဘူးလို့ ဘုရင်ခံဟောင်း ဆာဒေါ်မန်စမစ်က လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ ရက်လောက်က ဘိလပ်မှာ ပြောခဲ့တယ်။ ကျုပ်ရဲ့အကြံအစည်တွေဟာလဲ ဒီတုန်းက ဘယ်လိုရှိတယ် ဆိုတာဟာ စာရွက်စာတန်းတွေရှိတန်သလောက် ရှိပါသေးတယ်။ အခုန ဒေါ်မန်စမစ်ပြောသလို လက်နက်နဲ့ထ ချဖို့ မခဲယဉ်းဘဲနဲ့ ကျုပ်တို့ဘာလို့ မလုပ်ရသလဲဆိုတာကိုသာ ဒေါ်မန်စမစ်သိခဲ့ယင်၊ သူ့မိန့်ခွန်းထဲမှာ ဗြိတိသျှ အင်ပါယာကြီးက သခင်စိုး၊ သခင်သန်းထွန်း ကိုသိန်းဖေတို့ကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း မှတ်တမ်းတင်အုံးမှာဘဲ။
အဲဒီလို သစ္စာဖောက်လုပ်ငန်းတွေကတဖက်၊ ကျုပ်တို့အလုပ်လုပ်တဲ့အချင်းချင်းတွေကို ခြေထိုးတာတွေ၊ ကလိန် ကျတာတွေက တဖက်၊ အဲဒီဟာမျိုးတွေလုပ်ပြီး သူတို့ပါတီကြီးပွားအောင် လက်ဦးယင်ပြီးရောဆိုပြီး ဟိုဆိုင်း ဘုတ် ဒီဆိုင်းဘုတ်တွေတင်။ သူတို့လူတွေကနေရာတကာမှာ ၀င်ပြီး ကြိုးကိုင်ထား။ ဒိပြင်လူတွေကိုကန်ထုတ်သ လို လုပ်။ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ တို့ ကျုပ်နာမည်တို့ကို ရောင်တော်ပြန်သုံးပြီး သူတို့အားစုတာနဲ့ လူထုအစည်းအရုံးစင်ပြိုင် တွေပေါ်။ လူထုထဲမှာလဲ ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးဖြစ်၊ ပါတီတွေကလဲ ဟိုကပေါ် ဒီကပေါ်၊ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ လုပ်ငန်းဆိုလဲဘဲ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ ထဲမှာ သူတို့တတွေ အများအပြားနေရာယူထားပေမဲ့ ဘာမှမလုပ်ဘူး။ ပစ်ထားတယ်။ သူတို့ပါတီ လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကြတယ်။ အဲဒါနဲ့ဘဲ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ လုပ်ငန်းတွေဟာ မတွင်ကျယ်ဘူး။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ သာမှန်တယ်၊ ဒိပြင်လူတွေက မမှန်ဘူးဆိုပြီး နေရာတကာမှာ တင်စီးတင်စားလုပ်တယ်။ အဲဒါနဲ့ကျုပ်တို့ကို မေ တ္တာနဲ့ အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ သတိပေးတယ်။ ခင်ဗျားတို့ ဒါမျိုးလုပ်ယင် ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ ကြီးကွဲလို့ ခင်ဗျားတို့တက်မယ် ထင်လို့လား၊ ခင်ဗျားတို့ကို အင်္ဂလိပ်က စစ်တိုက်တုန်းသုံးပေမဲ့ စစ်ပြီးတဲ့အခါ ဆော်လိမ့်မယ်။ ကျုပ်တို့အချင်းချင်း မညီညွတ်မဲ့အလုပ်တွေ မလုပ်ပါနဲ့လို့ ကျုပ်အကြိမ်ကြိမ်ပြောခဲ့တယ် မရဘူး။ လုပ်မြဲလုပ်တာဘဲ။ ဆိုရှယ်လစ်တွေ ကို ကြံဖန်အပြစ်ရှာ၊ ပြော၊ ရေး၊ လက်ဝဲညီညွတ်ရေးကိုလုပ်ပြီး ပြန်ဖျက် ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ ကြီးကို ကွန်မြူနစ်ပါတီအ တွက် အလွဲသုံးစားလုပ်၊ တရားသဖြင့် သူတို့အလုပ်လုပ်လို့ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ ထဲမှာ ကွန်မြူနစ်တွေတွင်ကျယ်လာ တယ်ဆိုယင်လဲ ဟုတ်ပါရဲ့၊ ကျုပ်တို့ကလဲ ကြည်ဖြူပါတယ်။
အခုတော့ ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ က ရာထူးတွေကိုတော့ လက်ခံထားတယ်။ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ အလုပ်ကိုတော့ ကောင်းကောင်းမလုပ်ဘူး။ နာမည်ရစရာရှိပြီဆိုယင် ကွန်မြူနစ်ပါတီနာမည်နဲ့လုပ်တယ်။ လုပ်လို့မဟန်ဘူးဆို ယင် ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ ကိုလာထိုးအပ်ပြီ။ အဲဒါမျိုးတွေချည်းဘဲ။ ကျုပ်တို့ကလဲ သည်းခံနိုင်သလောက် သည်းခံပြီး လုပ် ပေးတာဘဲ၊ ပဲခူးဘက်မှာအငတ်ပြဿနာတွေ ဖြေရှင်းကြတယ်။ ပဌမ သူတို့ အသားရမည်ထင်တုန်းက သူတို့ပါ တီနာမည်နဲ့ လုပ်တယ်၊ ကိုးရိုးကားယားဖြစ်တော့မှ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လကိုလာအပ်တယ်။
ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ ဆုံးဖြတ်ပြီးအလုပ်တွေကို ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ နာမည်နဲ့သာ လုပ်ရမယ်လို့သူတို့ရော၊ ကျုပ်တို့ရောသဘော တူ စည်းကမ်း သတ်မှတ်ထားတယ်။ ဒါတွေ ဖောက်ဖျက်ပီး သူတို့လုပ်တာဘဲ။ ဒါနဲ့ သူတို့တတွေ လုပ်ပုံတွေဟာ မူ ကိုက မမှန်တော့ မှားပြီးရင်းမှားရင်းဖြစ်လာတယ်။ သူတို့တတွေ အမှားဖြစ်တာနဲ့ဘဲ ကျုပ်တို့ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ မှာလဲ ဘဲ ခဏခဏ ဂယက်ရိုက်တယ်။ သူတို့ဟာက ခုတမျိုး ခုတမျိုးဘဲ၊ ဘကြီးဘဘေဆိုလဲ သူတို့ဘဲ၊ အင်္ဂလိပ်သူလျှို ဘဘေ ဆိုလဲသူတို့ဘဲ၊ ငြိမ်းချမ်းသာယာစွာ လွတ်လပ်ရေးယူရန် ဆိုတာလဲသူတို့ဘဲ။ ခုချက်ချင်းဘဲ တော်လှန် ရေးလုပ်ရမယ်လို့ပြောတာလဲ သူတို့ဘဲ။ လုပ်တော့မလုပ်ပါဘူး။ လက်ဖ၀ါးလိုမှောက်ချည်လှန်ချည် သိပ်နိုင်တဲ့လူ တွေဘဲ။ သူတို့ဒီလိုပြောင်းလဲတာဟာ ဘာမှခြေခြေမြစ်မြစ် မရှိဘူး။ တကယ်ချကြဖို့လို့စဉ်းစားတဲ့ခါ တော်ရိ လျော်ရိ လုပ်သွားတယ်။ ပြီးတော့ ဘေးကျတော့ ကျုပ်တို့တတွေကဘဲစေ့စပ်ရေးသမားတွေဖြစ်သလို၊ သူတို့က တော့မဟုတ်သလို၊ အတူတူသဘောတူဆုံးဖြတ်ပြီး လုပ်ကြတာကို သူတို့သဘောမတူလေဟန်၊ သူတို့ဘဲသတ္တိရှိ လေဟန်၊ မဟုတ်မမှန် ပြောကြသေးတယ်။ ဥပမာ ပြည်သူ့ရဲဘော်တပ်ဖွဲ့ ကိစ္စတွေနှင့် ပက်သက်ပြီး စီတန်းလမ်း လျှောက်ပွဲလုပ်တုန်းက အမိန့်ယူဖို့ဘာဖို့ဆိုတာ ကွန်မြူနစ်တွေကဘဲ အဆိုသွင်းတာဘဲ။ တခြားလူတွေက ထောက်ခံတယ်။
ကျုပ်တို့ကတော့ အတွင်းသိအစင်းသိတွေဖြစ်တော့ သခင်စိုး ဘယ်လောက်သတ္တိရှိတယ်၊ ကိုသိန်းဖေ ဘယ် လောက်သတ္တိရှိတယ်၊ သခင်သန်းထွန်း ဘယ်လောက်သတ္တိရှိတယ်၊ ဒိပြင်လူတွေ ဘယ်လိုဆိုတာတွေ သိလို့ မ လွမ်းပါဘူး။ ဗမာပြည်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလဲ မပြီးသေးပါဘူး။ ဘယ်စခန်းထိလုပ်ရမယ်ဆိုတာလဲ မသိ သေးပါဘူး။ ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးလုပ်ငန်းကို ဆက်လက်ပြီး အပြီးတိုင်လုပ်ကြတဲ့ နေရာမယ်၊ ဘယ်သူဘယ်လို သ တ္တိရှိလို့ ဘယ်သူက ဘယ်လိုခြေသာတယ်ဆိုတာတွေ ပြီးခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကရော၊ နောင်လာမဲ့အဖြစ်အ ပျက်တွေကရော သက်သေခံပါလိမ့်မယ်။ ကျုပ်ရဲရဲကြီး ပြောရဲပါတယ်။
သတ္တိချင်းစမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက် တကယ်တမ်းလုပ်တမ်းဆိုယင် ထွက်ခဲ့ပါ။ မဟိန်း တမ်း၊ မဟောက်တမ်း၊ တကယ်လုပ်တမ်းပြိုင်ရဲပါတယ်။ ကျုပ်အကြောင်းတွေလဲ ခင်ဗျားတို့သိတန်သလောက် သိကြမှာဘဲ၊ ဒါပေမဲ့ အကုန်တော့ ဘယ်သူမှ သိကြမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကျုပ်ကလဲ မကြွားချင်ပါဘူး။ ကျုပ်နိုင်ငံရေး လုပ်လာတာ ကြွားချင်လို့လဲလုပ်လာတာ မဟုတ်ဘူး။ ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေး ရစေချင်လို့၊ ဗမာတွေကောင်းစား စေချင်လို့ လုပ်တာပါ။ ကျုပ်က နိုင်ငံရေးမလုပ်ရလို့ ထမင်းငတ်သွားမဲ့လူမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံရေးလုပ်တာ ကျုပ် အဖို့မယ် မြတ်တယ်လို့ကို မထင်ဘူး၊ အရှုံးကြီးနဲ့ချည်း လုပ်နေရတာဘဲ။
ယခုဝန်ကြီး ဖြစ်ရပေမဲ့ ကျွန်တော့်မှာ ဘာမှထူးခြားခြင်းမရှိပါဘူး။ ဂျပန်ခေတ်တခတ်လုံးကလဲ စစ်ဝန်ကြီးဆိုပြီး ကျွန်တော့မှာ အ၀တ်နှစ်ထည် သုံးထည်ကလွဲပြီး အပိုမရှိခဲ့ပါဘူး။ ယခုခေတ်ရောက်ပြန်တော့ ဒါတွေကို ၀တ်နေ ရတာဘဲ။ ယခုဝတ်နေတဲ့ ဘောင်းဘီနှင့်အင်္ကျီတောင် ယခုဝန်ကြီးရာထူးကို ၀င်ယူပြီးမှ မိတ်ဆွေတွေက ကြည့်မ ကောင်းလို့ အတင်းအချုပ်ခိုင်းတာနဲ့ ကြံဖန်ပြီး ချုပ်လိုက်ရတယ်။ ယခုဝန်ကြီးအဖြစ်နှင့် လခဘယ်လောက်ယူ မယ်ဆိုတာ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ က ဆုံးဖြတ်မပေးသေးဘူး။ ဘယ်လောက်ဘဲ ဆုံးဖြတ် ဆုံးဖြတ် ကျုပ်မှာ စားလောက်ရုံ လောက်က ပိုမှာမဟုတ်ဘူး။
ပိုက်ဆံမရလို့ ဂုဏ်ဆိုတာကတော့ ၀န်ကြီးဖြစ်ရတဲ့အတွက် ဘယ်လောက်များတက်သွားသလဲလို့ မေးကြစမ်းပါ။ ယခုလို မီးတောင်ကြီးပေါ်မှာ တက်ထိုင်နေရတာနဲ့တူတဲ့ ၀န်ကြီးရာထူးဆိုတာ ခုနေအခါ ကျူပ်တို့ ယူချင်တာမ ဟုတ်ဘူး။ တိုင်းပြည်ရဲ့အကြောင်းကြောင်းတွေထောက်ပြီး မျက်စိမှိတ်ပြီး စွန့်ယူရတာဘဲ။ လူထုကြီးက ကျုပ်ကို ပေးထားတဲ့ လူထု ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ဂုဏ်ကို ၀န်ကြီးဆိုတဲ့ဂုဏ်ထက် ကျုပ်ပိုမကတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ မှတ် ထားလိုက်ကြပါ။ ကျုပ်စိတ်ထဲမှာဆိုယင် ၀န်ကြီးဆိုတဲ့ ဂုဏ်ဟာ လူထုခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ရဲ့ခြေဖျားမှာ ကပ်နေတဲ့ ခြေမှုန့်လောက်ဘဲလို့ ကျုပ်မှတ်ထားပါတယ်။
ဒါကြောင့်လဲ လွန်ခဲ့တဲ့ သပိတ်ကိစ္စကြီးတွေကို ဖြေရှင်းပြီးတာနဲ့ တပြိုင်နက် ကျန်အရေးကြီးတဲ့ အတွင်း လုပ်ငန်းတွေကို တခြား လူတွေနှင့် လွှဲထားပြီး လူထုလုပ်ငန်းကို ထွက်လုပ်ဖို့ ကျုပ်ဝန်ကြီးရာထူးက ထွက်စာတင် ထားတယ်။ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့က ဆိုင်းထားသေးတဲ့အတွက် ကျုပ်မထွက်ခဲ့ရဘူး။
ကျုပ်တို့ ယခုလို အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာ ၀င်ပြီးထားနဲ့ လူထုလိုချင်တာတွေ အကုန်လုံးကို ကျုပ်တို့လုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ ကျုပ်တို့ ဘယ်တုန်းကမှ လူထုကိုတပတ်မရိုက်ခဲ့ဘူး။ အကုန်လုံးလုပ်ပေးနိုင်ဖို့ ဆိုတာလဲ လွတ်လပ်ရေးရတောင် ချက်ချင်းလုပ်ပေးနိုင်မယ်မဟုတ်ဘူး။ နေ့ချင်းညချင်းတော့ ပဒေသာပင်ပေါက်မပြနိုင်ဘူး။ ကျုပ်တို့ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ ကအစိုးရအဖွဲ့ထဲဝင်တဲ့အခါ တိုင်းပြည်ကို ကြေညာတဲ့ကြေညာချက်ကို သေသေချာချာ ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါ၊ ကျုပ် တို့ဘာပြောထားတယ်ဆိုတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ကျုပ်တို့အစိုးရအဖွဲ့ထဲ ၀င်လာပေမဲ့ ဒီအစိုးရအဖွဲ့ဟာ အမျိုးသားအစိုးရရဲ့ အရည်အချင်း၊ အခွင့်အရေးအလုံးစုံနဲ့ ညီညွတ်ပြီ၊ ကိုက်ပြီလို့ မယူဆသေးဘူး။ ပြီးတော့ ဒီအစိုးရဟာ လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံကို တဖြောင့်ထဲပို့ပေးမဲ့ယာယီ အစိုးရလို့လဲ မဆိုနိုင်ဘူး။ ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးဟာလဲ သေချာပြီ မကြာခင်ရတော့မယ်လို့ မဆိုနုိုင်သေးဘူး။ အစိုးရအမှုထမ်းများနဲ့ အခြားလူ အတန်းအစားတို့ရဲ့ လက်ငင်းပြဿနာများကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်တကြောင်း၊ ခြောက်လခန့်တွင် တရားသဖြင့် လွတ်လပ်စွာ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ရန်တကြောင်း၊ အခြားလက်ငင်းပြဿ နာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်ကောင်းဖြေရှင်းနိုင်ပြီး နေသူရိန်ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း၊ အမျိုးသားအစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းနိုင်မဲ့ အခြေသို့ တိုးတက်ပြီးလှမ်းသွားနိုင်ကောင်း လှမ်းသွားနိုင်မဲ့ အခြေခံများရပြီထင်လို့သာ ၀င်လုပ်ကြည့်တာဘဲ။ ဒီ လိုကျုပ်တို့တိတိလင်းလင်းကြေညာခဲ့တယ်။ အဲဒီလို ရှင်းရှင်းပြောထားရက်နဲ့ အချို့ က နဝေတိမ်တောင်စကား တွေ ပြောကြသေးတယ်။ အဲဒါတွေတော့ အကျယ်ရှင်းနေဖို့ အချိန်မရှိဘူး၊ တခုလောက်ဘဲပြောပြမယ်။
ကျုပ်တို့ရတာတွေဟာ အိန္ဒိယလိုမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်။ ဘယ်လိုမဟုတ်တယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ ကျကျနန သိသေးတာမဟုတ်ဘူး။ ဥပမာ“လန်ဒန်တိုင်း” လို သတင်းစာ ခေါင်းကြီးပိုင်းကနေပြီး အိန္ဒိယပြည်မှာလို ဗမာ ပြည်မှာလဲ ကြားဖြတ် အမျိုးသားအစိုးရ သဘောမျိုး ဥပဒေအရ မဟုတ်သေးသော်လဲ လက်တွေ့သဘောဖြစ်နေ ပြီလို့ဆိုတယ်။ ကိုင်း - ဒီဟာကို ဘယ့်နှယ်ပြောမလဲ၊ “ နေရူး ” အစိုးရလဲ တကယ်ပြောရမယ်ဆိုယင် ဘုရင်ခံချုပ် ရဲ့ အမှုဆောင်အဖွဲ့ဘဲ၊ လက်တွေ့တော့ ကြားဖြတ်အမျိုးသားအစိုးရသဘောမျိုး လုပ်ရစေမယ်လို့ ဆိုထားတာဘဲ၊ ဘယ်လောက်အထိဟုတ်တယ်၊ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကျုပ်တို့ယခုမသိနိုင်သေးဘူး။
တချို့ က ပြောကြတယ်။ ကာကွယ်ရေးနဲ့နိုင်ငံခြားရေးဌာနကို ကျုပ်ကိုပေးပေမဲ့ ဘုရင်ခံရဲ့အတိုင်ပင်ခံသာဖြစ် တယ်လို့။ ဘာမှ သေသေချာချာမသိကြဘဲ ရမ်းပြောနေကြတာဘဲ၊ အိန္ဒိယနဲ့မတူဘူးလို့ပြောကြတယ်၊ အဲဒီဟာ သဘောရော၊ လက်တွေ့ရော တူအောင် ယခုနိုဝင်ဘာလမှာ စတင်ကျင်းပမည့် ဘိလပ်ပါလီမန်အတွင်းမှာ ဖြစ် အောင်လုပ်မယ်လို့ ကျုပ်တို့ပြောထားတာဘဲ၊ ကျုပ်တို့ဟာ လက်တွေ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ဝေဖန်ရမယ်၊ အိန္ဒိယနဲ့ဗ မာပြည် အစရှိသည်အားဖြင့် နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမယ်၊ တူတဲ့အချက်တွေ၊ မတူတဲ့အချက်တွေ အဲဒါတွေကိုလဲကြည့်ဖို့ လိုတယ်။ အိန္ဒိယပြည်က ကျုပ်တို့ထက်အဆပေါင်းများစွာ နယ်ကျယ်တယ်၊ လူများတယ်၊ ပစ္စည်းပေါတယ်။ ကု လားလေတပ်၊ ရေတပ်၊ ကုန်းတပ် အစုံအလင်ရှိတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲတွေ လုပ်ပြီးပြီ။ ဒါတွေကိုလဲကြည့်ရမယ်။
ကျုပ်တို့ကလဲ ဘယ်ဟာမှလဲ မဖုံးဘူး။ ကျုပ်တို့ရဲ့မူလ၀ါဒ လုပ်ငန်း ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုလဲ ပစ်ပယ်ထားတာ မ ဟုတ်ဘူး။ ဒါတွေလဲ ဆက်လုပ်မယ်လို့ ဆိုထားတယ်။ အဲဒီလိုပြောဆိုပြီး ရာထူးယူခဲ့တယ်။ အတူတူချင်းရာထူးယူ တာဘဲ၊ ကွန်မြူနစ်တွေက ငပြူးထက်တမူးဖိုး ပိုရှူလိုက်ချင်ကြသေးတယ်။ ကျုပ်တို့ အတွင်းသိတဲ့ လူတွေက တော့၊ ဘာဖြစ်လို့ လုပ်တယ်ဆိုတာ ကျုပ်သိပါတယ်။ ကျုပ်ရှင်းရှင်းပြောမယ်၊ ကွန်မြူနစ်တွေက ပဌမရာထူး နှစ် နေရာလိုချင်တယ်ပြောတယ်။ သူတို့ အဲဒီတုန်းက ဘာတွေတောင်းပါ။ အဲဒါတွေ ရမှ ရာထူးလက်ခံပါ၊ ဒီလိုပြော တာမဟုတ်ဘူး။ နှစ်နေရာ မရနိုင်တော့မှ ခြေထိုးတာဘဲ။ ရာထူးယူတော့ ကိုယ့်နောက်လိုက်ငယ်သားတွေ ကျေ နပ်အောင် ကျုပ်တို့ယူချင်လို့ယူရတာမဟုတ်ပါဘူး၊ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ က လူကြီးတွေ ယူချင်လို့ သူတို့ကို ထိန်းဖို့သိမ်း ဖို့ ၀င်ယူရတာပါ။ အဲဒီလိုသဘောမျိုးနဲ့ သူတို့နာမည်ကြီးမှု၊ သူတို့ခေါင်းဆောင်အဖြစ် တည်တံ့မှု၊ နောက်ရွေး ကောက်ပွဲကျယင် သူတို့အသားယူနိုင်ဖို့၊ ကျုပ်တို့ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ ဘာဖြစ်သွားသွားဆိုတဲ့ သဘောမျိုးနဲ့လုပ်ကြတာ ဘဲ။
ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပက်သက်ပြီး အလံနီ ကွန်မြူနစ်တွေနဲ့ သိန်းသန်းကွန်မြူနစ်တွေက ပြောင်ချော်ချော်ပြောနေကြ တယ်။ အမှန်စင်စစ်ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကို အခြားဘယ်နည်းမှ မရှိနိုင်တဲ့ လမ်းမှန်ကြီးအနေနဲ့ မယူဆပါဘူး။ ဒါ ပေမဲ့ ကွန်မြူနစ်တွေ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောတာ၊ ကျုပ်ကတော့ရယ်ချင်တယ်။ အိန္ဒိယပြည်က ကွန်မြူနစ် (ဂျို ရှီ) ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လလောက်က ဘာစာရေးလိုက်သလဲဆိုလို့ရှိယင်၊ မင်းတို့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ကြ၊ ရွေး ကောက်ပွဲပြီးလို့ရှိယင် (Major Political Development) နိုင်ငံရေးအခြေအနေ အကြီးအကျယ် ပြောင်းလွဲလာ လိမ့်မယ်ဆိုပြီး စာရေးလိုက်တယ်။ ဒါတွေကျုပ်သိပြီးပါ၊ မပြောချင်လို့နေတာဘဲ။
ကျုပ်တို့ ရာထူးယူတာလဲ ဘာမှမကြာသေးပါဘူး။ အရက် ၂၀ လောက် ရှိပါသေးတယ်။ အဲဒီအရက် ၂၀ ထဲမှာ ပဌ မငါးရက်၊ ခြောက်ရက်လောက်က ဟိုတုန်းက သပိတ်ကိစ္စတွေ ဖြေရှင်းရတယ်။ ကျုပ်တို့သပိတ်သမား အများ ကျေနပ်အောင် ဖြေရှင်းခဲ့တယ်။ ဒါကျုပ်တို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း လုပ်ခဲ့တာဘဲ။ ကွန်မြူနစ်ဝန်ကြီးလဲ သဘောတူခဲ့ တာဘဲ။ အဲဒါကိုဘဲ ကျုပ်ကို လူညာဆိုတဲ့သဘောမျိုး ပြောသေးတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီသပိတ်တွေကဘဲ ဗမာပြည် ကြီးတော်လှန်ရေးလုပ်ရမလို ပြောကြသေးတယ်။ ယခု “အလံနီ” တို့၊ “သိန်းသန်း” တို့ဆိုတဲ့ ကွန်မြူနစ်အမည်ခံ ခေါင်းဆောင်တွေဟာ တော်လှန်ရေးသမား ဘယ်လောက်စစ်တယ်ဆိုတာ တဖြည်းဖြည်းတော့ ခင်ဗျားတို့ ကိုယ် တိုင် ပိုသိလာမှာဘဲ။ ကျုပ်တော့ သိပ်ပြီး မပြောလိုဘူး။ သို့ပေမဲ့ နည်းနည်းပါးပါးတော့ ပြောခဲ့မယ်။
ယခု “သိန်း - သန်း” ကွန်မြူနစ်တွေက အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်တွေချက်ချင်းထွက်သွားရမယ်၊ ဘာရမယ်၊ ညာရမယ်နဲ့ အသံကောင်းဟစ်နေကြတယ်။ အော်လို့ရမှာ မဟုတ်ဘူး၊ လုပ်မှရမှာ။ အဲဒီတော့ ကျုပ်က သူတို့ကို မေးချင်တယ်။ အင်္ဂလိပ်တပ်တွေ ချက်ချင်းထွက်သွားအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊ ပြောပြစမ်းပါ၊ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ ကို ခုဆဲနေကြတဲ့ အ ချောင်သမား နိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေနဲ့ သူတို့တလေထဲမှုတ်နေတာသာတွေ့ရတယ်။ ဒီဟာမျိုးကို သူတို့ကွန်မြူ နစ်စကားမျိုးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုယင် (Revolutionary Phrase Mongering) တော်လှန်ရေး ဗန်းပြ စကားတွေသုံး ပြီး သူတို့ရဲ့ တကယ့်အချောင်သမား ၀ါဒကို ဖုံးဖို့၊ ဖိဖို့ လုပ်တာဘဲ။
သပိတ်တွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး ကျုပ်တို့ အတွင်းမှာတော့ ကွန်မြူနစ်တွေက သပိတ်သမားတွေ ကြာကြာမခံနိုင်ဘူး။ ထမင်းထုပ်ပေးရတဲ့ လူတွေလဲ ညည်းကုန်ပြီလို့ပြောတယ်။ အဲဒီလို ပြောတဲ့လူဟာ ကွန်မြူနစ်အမည်ခံ သခင်ချစ် ပါဘဲ။ အထဲမယ်တုန်းက ကျုပ်က မစ္စတာရာဇတ်ကို ၀န်ကြီးတနေရာ ပေးရယင် ဘယ့်နှယ်လဲ မေးတယ်။ သူတို့ ကဘဲ မလိုသေးပါဘူးလို့ပြောတယ်။ ကရင်အမျိုးသားတွေအတွက် ကျုပ်နဲ့ သခင်နု လုပ်ပေးတယ်။ အဲဒါလဲ တချို့  လူတွေဆီ သွားပြီး တမျိုးပြောလိုက်သေးတယ်။ အဲဒီလောက် ဗလောင်းဗလဲနိုင်တဲ့လူတွေ။
အဲဒါနဲ့ ကျုပ်တို့ ပဌမသပိတ်တွေမှ ကောင်းကောင်းမလှန်ကြသေးဘူး။ အောက်တိုဘာလ ၅ ရက်နေ့မှာ ကွန်မြူ နစ်တွေ ကြီးစိုးနေတဲ့ အလုပ်သမားသမဂ္ဂက ၁၁ ရက်နေ့ ကျေနပ်အောင် အကြောင်းမပြန်နိုင်ယင် သပိတ်တွေ မှောက်မယ်ဆိုပြီး နို့တစ်ပေးခဲ့တယ်။ ခင်ဗျားတို့ဘဲ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ တဖက်ကလဲ ကျုပ်တို့ ပြည်သူ့လွတ်လပ်ရေး ချုတ်ချယ်တဲ့ဥပဒေတွေ ဖျက်ဖို့ လုပ်နေတယ်။ ယခု ၉ ရက်၊ ၁၀ ရက် အတွင်းဆိုယင် ဗမာပြည်ကာကွယ်ရေး နည်းဥပဒေတွေ ပယ်ဖျက်နိုင်လိမ့်မယ်။ ခုဖမ်းထားတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလဲ ယခုဘဲ လွှတ်ဖို့ လုပ်နေပြီ၊ လတ် တလော ဥပဒေတွေကိစ္စ၊ တခြား ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ က ဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တဲ့ ပြည်သူ့လွတ်လပ်ရေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စအ ရပ်ရပ်တွေကိုလဲ တပြိုင်နက် လုပ်နေရတယ်၊ ဘဏ္ဍာရေး အာဏာ တင်းပြည့်ရဖို့လဲ တောင်းထားတယ်။
ယခုလာမည့် ပါလီမန်မှာ ဗမာပြည် တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော် ခေါ်နိုင်မည့် ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်အောင်လဲ စီစဉ် နေတယ်။ ယခု အင်္ဂလိပ်တွေကို အစိုးရအမှုထမ်းထဲ သွင်းနေတဲ့စနစ်ကို ရပ်ပစ်လိုက်ပြီး “ပရိုဂျက်” စီမံကိန်းတွေ ကိုလဲ တိုင်းပြည်အကျိုးကို ကြည့်ပြီး ဘယ်လိုလုပ်ရကောင်းမယ်ဆိုတာ စိစစ်နေလျက်ပါဘဲ၊ နောက် ဗမာပြည် ကာကွယ်ရေးအတွက်လဲ အစီအစဉ်တွေ ဆွဲခိုင်းထားတုန်းဘဲ။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်းချုပ်အသင်းကြီးကိုလဲ ကိုယ်စား လှယ်လွှတ်နိုင်အောင် ကျုပ်တို့ ကြိုးစားမယ်။ အဲဒီလို ကျုပ်တို့စီမံနေတယ်။ အလုပ်သမားတွေအတွက်ဆိုလဲ အ လုပ်သမားတွေနဲ့ ဆိုင်တဲ့ တွဲဖက်အဖွဲ့တွေ၊ အစိုးရ အမှုထမ်းအရာထမ်းတွေလဲ အဲဒီလိုအဖွဲ့တွေနဲ့ သူတို့တရားသ ဖြင့် လိုချင်တာတွေကို တတ်နိုင်သမျှရအောင် ကျုပ်တို့လုပ်ပေးမှာဘဲ။ လုပ်မပေးဘူးလို့မပြောဘူး။
ယခု သူတို့ ကွန်မြူနစ်တွေ မြှောက်ပေးတဲ့ အလုပ်သမားသမဂ္ဂက တောင်းဆိုချက်တွေထဲမှာ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ အဖွဲ့ ချုပ်က မူအားဖြင့် လက်ခံထားတဲ့အချက်တွေပါ ပါတယ်။ အဲဒါတွေကို ကျုပ်တို့ရအောင် ကြိုးစားပေးရမှာဘဲ၊ ကြိုးလည်းကြိုးစားမှာဘဲ။ ရတဲ့အခါ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ အဖွဲ့ချုပ်က “ မကျေနပ်ဘူး၊ မင်းတို့ထွက်ခဲ့ ” ဆိုယင်လဲ ထွက်ဖို့ အဆင်သင့်ဘဲ။ တတိုင်းတပြည်လုံးရှိတဲ့ အမှုထမ်း၊ အရာထမ်း၊ အလုပ်သမား အစရှိသည်အားဖြင့် လူထုရဲ့အခြေ ခံ လခတွေကိုလဲ (သုံးလအတွင်း) ပြောင်းလွဲစီစဉ်ပေးဖို့ ကျုပ်တို့လုပ်နေတယ်။ သို့သော် ယခုရမှ ဖြစ်မယ်ဆိုယင် တော့ ကျုပ်တို့လဲ မတတ်နိုင်ဘူး။ ခင်ဗျားတို့ မကျေနပ်ဘူးဆိုလဲ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ အဖွဲ့ချုပ်ကို သွားပြီးတော့သေသေ ချာချာပြောပြပါ၊ ကျုပ်တို့ထွက်ပေးဖို့ အဆင့်သင့်ရှိပါတယ်။
သုံးလအတွင်းလဲ အမျိုးသားအစိုးရ အခြေအနေမျိုးကို ဥပဒေသဘောရော ကျပ်ပြည့်တင်းပြည့် ဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ် အောင် ကျုပ်တို့ ကြိုးစားမယ်။ ကျေကျေနပ်နပ်မရဘူးဆိုယင် ကျုပ်တို့ထွက်မှာဘဲ။ အဲဒီကိစ္စတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး ကျုပ်တို့ဝန်ကြီးအဖွဲ့က မကြာမီ ကြေညာချက်တရပ် ထုတ်ပြန်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ မြှော်လင့်ပါတယ်။ ကိုင်း - အဲဒီလို ကျုပ်တို့ ရှင်းရှင်းပြောထားပြီ၊ ကျုပ်တို့ အဲဒီလိုပြောထားတဲ့အတိုင်း လုပ်သလား မလုပ်ဘူးလားလဲစောင့်ကြည့် ကြပါ။ အလုပ်သမားတွေအတွက် ကျုပ်ဘာလုပ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတလဲ နည်းနည်းပါးပါးပြောရဦးမယ်။ ဒလ၊ ဖူးကား သစ်စက် အစရှိတဲ့ သပိတ်တွေမှာ ကျုပ်တို့ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ ၀င်ကူခဲ့လို့ သူတို့ ဇာတ်မျောနေရာက အတော်အတန် ဟန်ကျသွားရတယ်မဟုတ်လား။ အလုပ်သမားတာဝန်ခံ လုပ်နေကြတဲ့ သမဂ္ဂအစည်းအရုံးက အတွင်းရေးမှူး နှစ်ဦးကိုလဲ ကျုပ်ရာထူးမယူခင်ဘဲ “ ကျုပ်ကို အစစအရာရာ အကြံဥာဏ်ပေးပါ။ ခင်ဗျားတို့ပေးတဲ့အကြံဥာဏ်ကို အခြေပြုပြီး အလုပ်သမားတွေအတွက် ကြိုးစားလုပ်ပေးမယ် ” အဲဒီလို ပြောခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကွန်မြူနစ်တွေ ဖက်က မတိုင်ပင်ဘူး။
ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ အလုပ်သမားတွဲဖက် ကော်မီတီမှာ သူတို့လဲပါတယ်။ ဒါကိုလဲ မတိုင်ပင်ဘူး။ ဖြုန်းဆို သပိတ်မှောက် ပစ်မယ် လုပ်တာဘဲ။ အဲဒါခင်ဗျားတို့ဘဲ ဘာသဘောလဲဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ကြပေတော့။ ပြီးတော့ သူတို့က “ပ ရိုဂျက်” တွေဖျက်ဖို့ သပိတ်မှောက်ရတာပါပြောတယ်။ ပရိုဂျက်တွေဘဲ ပျက်မလား၊ အလုပ်သမားတွေဘဲနာမ လား၊ တိုင်းပြည်ဘဲနာမလား၊ အဲဒါ စောင့်ကြည့်ကြပေတော့။ ကျုပ်တို့မြင်တာကတော့ပရိုဂျက်မပျက်မည့်အပြင် လုပ်သမားတွေပိုနာမယ်။ တိုင်းပြည်လဲ ထိမယ်။ ယခုဘဲ ထိနေပြီ။ အညစ်အကြေး ကူလီတွေ အလုပ်မဆင်းရ အောင် တားနေတာဟာ ရန်ကုန်မြို့ ကြီးရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်မှာ စိုးရတယ်။
ဓနိတော ဓါတ်ဆီဆိုင်ကို တားလို့ ဓါတ်ဆီမရယင် ဘတ်စ်ကားတွေ မသွားနိုင်ဘူး။ မသွားနိုင်ယင် ကုန်ပစ္စည်းတွေ ရှားကုန်မယ်။ ရှားကုန်ယင် ခင်ဗျားတို့ကိုဘဲ ထိမှာဘဲ။ ပရိုဂျက်တွေ ဘယ်မှာထိလို့လဲ။ မသိနားမလည်တဲ့နောက် လိုက်တွေကို ဟိုဟာမြှောက်ပေး၊ ဒီဟာမြှောက်ပေးတော့လုပ်မယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်တိုင်ကတော့ အနစ်နာခံကြမှာ မ ဟုတ်ဘူး။ အဲဒီလိုဖြစ်ရက်နဲ့ ဒီကွန်မြူနစ်တွေ ခွတုတ်နေတာကို ခံကြမယ်ဆိုယင်လဲ ဒါဆိုင်ရာလူတွေရဲ့သဘော ဘဲ။ ကျုပ်တို့ကတော့ အလုပ်သမားနဲ့ တိုင်းပြည်နာမယ်ဆိုယင်တော့ ဒီတိုင်းကြည့်မနေနိုင်ဘူး၊ အရေးယူရလိမ့် မယ်။ အဲဒါ တိတိလင်းလင်းဘဲ ကျုပ်ပြောတယ်၊ ပုလိပ်တို့ဘာတို့မသုံးချင်ပေမဲ့ သုံးလာရလိမ့်မယ်။
ကျုပ်တို့ အလုပ်သမားတွေရဲ့ တရားတဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကို မပေးဘူးလို့မဆိုဘူး။ ပေးရအောင် ချက်ချင်းစဉ်း စားကြစို့ ၊ အဲဒါကို ပြောတယ်။ ဒါကို အတင်းအကျပ် ဟိုဟာ ဒီဟာကို ချက်ချင်းပေးမှ ဖြစ်မယ်ဆိုပြီး သပိတ် မှောက်တာဘဲ။ အဲဒါ ခင်ဗျားတို့သိအောင် ကျုပ်ပြောပြတာဘဲ။ ကျုပ်ကတော့ ခင်ဗျားတို့ကို မလိမ်ဘူး၊ ရှေးကလဲ မလိမ်ဘူး၊ ယခုလဲ မလိမ်ဘူး၊ နောက်လဲ မလိမ်ဘူး၊ သခင်စိုးတို့လို ဘုရားငဆောင်းကျင့်နည်း၊ သူများ သားပျို သ မီးပျိုတွေလဲ မဖျက်ဆီးဘူး၊ ရွှေ၊ ငွေ၊ စိန်၊ ကျောက်တွေလဲ ကျုပ်တို့ရအောင် မလုပ်ဘူး၊ နိုင်ငံရေးနဲ့ စီးပွားရှာဖို့ မ လုပ်ဘူး၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အချင်းချင်းကိုလဲ ရန်သု့လက်ဘယ်တော့မှ မအပ်ဘူး။
အဲဒါတွေကို ကွန်မြူနစ်တွေက လုပ်တယ်။ ကွန်မြူနစ်တွေဟာ တိုင်းပြည်အပေါ်၊ အလုပ်လုပ်တဲ့လူအချင်းချင်းအ ပေါ်၊ ညီညွတ်ရေးပျက်ပြားရာ ပျက်ပြားကြောင်း၊ လွတ်လပ်ရေးကြန့်ကြာရာ ကြန့်ကြာကြောင်း သစ္စာဖောက် လုပ်ခဲ့တယ်။ သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေ ဖောက်ဖျက်ပြီး အတွင်းဆွေးနွေးတာတွေ အပြင်ထုတ်ပြော၊ မဟုတ်မမှန်တာတွေ လုပ်ပြော၊ အချင်းချင်းအပေါ်ပုတ်ခတ်၊ သူတို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးရောဆိုပြီး သူတို့ပါတီကြီး စိုးရေးကိုသာ ပဌမ လုပ်တယ်။ ကျုပ်တို့ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ ဟာ ညီညွတ်ရေးအင်အားစုကြီး၊ ဒီအင်အာစုကြီး တည်တံ့မှ တိုးတက်မှ ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေး မြန်မြန်ရမယ်၊ ကောင်းကောင်းရမယ်၊ အဲဒီလို ကျုပ်တို့ယူဆတယ်။ သူတို့က အကြိမ်ကြိမ် အဖန်ဖန် သူတို့ရဲ့ အယူအဆတွေကို မလျှော့ဘူး။ ဘာဆုံးဖြတ်ချက်ရှိရှိ၊ ဘယ်လိုဘဲ သူတို့သဘော တူထားထား သူတို့ လုပ်ချင်ရာလုပ်တယ်။ အဲဒီတော့ ကျုပ်တို့က သူတို့ကိုထုတ်ပစ်ရုံက လွဲလို့ တခြား ဘာနည်း လမ်းမှ မရှိတော့ဘူး။
အဲဒါနှင့်ခင်ဗျားတို့ မေးချင်မေးကြမယ်၊ ဒီလောက်ဆိုးနေတဲ့လူတွေကို ဘာလို့ဒီလောက်ကြာကြာ ထားရသလဲဆို တာ မေးနိုင်တယ်။ ကျုပ်တို့က နယ်ချဲ့ သမားတွေကို တိုက်ဖျက်ရာမှာ အင်အားနည်းများသွားမလားလို့ ချိန်ဆ နေတာက တကြောင်း၊ သူတို့ထဲမှာ တချို့ လူတော်တွေကို အားနာနေတာကတကြောင်း၊ မုဆိုးတို့မည်သည် လက်နက်လေးမြှားကောင်းကို ချစ်မြတ်နိုးရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်း လူကောင်းများကို ငဲ့ညှာသောအားဖြင့် သူတို့ပါတီ ကိုပြုပြင်လျှင် တဖြည်းဖြည်းရလိမ့်အုံးမယ်လို့၊ ငုံးကလေးများလို တနေ့သော်လဲ အမြီး ပေါက်နိုးနိုးနဲ့ စောင့်ဆိုင်း မြှော်လင့်နေခဲ့တာဘဲ။ အဲဒီ အကြောင်းတွေကြောင့် ဒီလောက်ကြာအောင် သည်းခံလာတာဘဲ။ ကျေနပ်လို့တော့ မဟုတ်ဘူး။
ယခုတော့ သူတို့လုပ်တာတွေဟာ လွန်နေရုံမကဘူး၊ သူတို့နှင့်လုပ်ယင် မတိုးဘဲ နောက်ပြန်ဆုတ်မှာ စိုးရိမ်ရတဲ့ အတွက် သူတို့ကို ထုတ်ပစ်ရတာဘဲ။ တချို့ က သူတို့ထုတ်ပစ်တာမစောဘူးလား၊ ဦးစီးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး ထိ အောင် မစောင့်နိုင်ဘူးလား ပြောကြတယ်။ ကျုပ်တို့ အရင်တုန်းက စောင့်ခဲ့တော့ ကျုပ်တို့ဘဲ ခံရတာဘဲ။ သူတို့ ကအင်မတန် အညစ်တန်တဲ့လူတွေ၊ အခုတော့ ကျုပ်တို့သူတို့အရင်ဦးအောင် ချတာဘဲ။ ဒီလိုမချယင် ဒီလူတွေနဲ့ မဖြစ်ဘူး၊ အတိုချုပ်ရမယ်ဆိုယင် ကျုပ်ဘယ်လိုလူလဲ၊ မိန်းမရေးမှာ ရှုပ်ထွေးသလား၊ တခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တွေကို ဂျောက်တွန်းခဲ့သလား အစရှိတဲ့ ဒီလိုကိစ္စတွေကို လူထုရဲ့ရှေ့ မှာ ဘယ်အချိန်အခါမဆို တကယ်အစစ် ဆေးခံရန် အသင့်ရှိတယ်။ ကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင်တွေရော၊ တခြား ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ ပြင်ဖက်က ခေါင်းဆောင်တွေ ရော အစစ်ခံဝံ့ရဲ့လားလို့ ကျုပ် နောက်ဆုံးစကား ဆိုလိုက်တယ်။ ။
အတွဲ ၂၀ - အမှတ် ၁၆
၂၈ - ၁၀ - ၄၆။
ဒီဆောင်းပါးရေးတာဘယ်သူလဲသိချင်တယ်။ ဆောင်းပါးကိုဖော်ပြရင် ဆောင်းပါးရေးသူကိုပါဖော်ပြရမယ်။ ယုံထင်ကြောင်ထင်ဖြစ်အောင်မလုပ်ပါနဲ့။ ဒီblogကမရိုးသားဘူး။ ဒီလောက်ပဲပြောချင်တယ်။